Labada Tixraac Ecommerce Cusub ee Ay Tahay Inaad La Socoto | Martech Zone
Labada Meeris ee Ganacsi ee Cusub ee ay Tahay inaad La Socoto
Jimco, Abriil 10, 2015 Jimco, Abriil 10, 2015 Jim Stern
Ganacsi (sida ku cad Wikipedia ilaa Maarso 19 markay tahay 10:18 am Waqtiga Baasifigga)
Dhaqan kasta oo gacan ka geysta iibinta alaabada macaamiisha tafaariiqda. Heerka tafaariiqda ee dukaanka, baayacmushtarku wuxuu loola jeedaa noocyada kala duwan ee alaabada la heli karo ee iibka ah iyo soo bandhigida alaabadaas si ay u kiciso xiisaha isla markaana u sasabto macaamiisha inay wax iibsadaan.
Sheekada koowaad (apocryphal) ee ka ganacsiga iyo xogta waxay khuseysaa xafaayadaha la iska tuuri karo iyo biirka. Xisaabtu waxay muujisay in dadka ka iibsaday xafaayadaha la tuuri karo dukaamada raaxada, halkii ay ka ahaan lahaayeen safarada si wanaagsan loo qorsheeyay ee ku tagaya dukaanka weyn ee sanduuqa, sidoo kale - si xamaasad leh - waxay u qaateen lix baako oo biir ah.
Doorka baayacmushtarigu waa inuu go'aan ka gaadho haddii labadaas shay la wada kaydin karo ay kor u qaadi doonto iibinta biirka, ama kala-saarista jidh ahaan ay kordhinayso iibinta waxyaabaha kale ee xamaasadda leh. Ganacsade runta-wadista baayacmushtaruhu wuxuu tijaabin lahaa labadaba - juquraafi ahaan kaladuwan - gobollada kala duwan ee dhaqan-dhaqaale - qiime kala duwan.
Baayac-mushtarka dukaanka ayaa gaadhay heerkiisii ​​ugu sarreeyay ee xogta markii sheekooyin ka soo baxeen Japan oo ku saabsan sida 7-Eleven dukaanno u beddeleen alaabooyinka ay ku hayaan khaanadaha ay ku saleysan yihiin waqtiga maalinta si loo kordhiyo booskooda tafaariiqda ee kooban.
Soo saarayaasha qaar waxay leeyihiin xoogaa xoogsasho ah markay la shaqeynayaan dukaamada waaweyn. Iyada oo lagu beddelayo xadad sare, kharashka dhoofinta oo hooseeya, baakadaha khaaska ah, iwm. Silsilad tafaariiq ah ayaa laga yaabaa inay tixgelin gaar ah u yeelato lamaanayaasha ugu fiican
Laakiin maxaa dhacaya markii bandhigyada dukaanka aan la arki karin ama si firfircoon loo soo saaro iyadoo kuxiran dukaanka? Ku soo dhowow ganacsiga internetka.
Halkee, Oh Meeye alaabtaydii?
Haddii aad wax ku iibiso Amazon, BestBuy ama Costco, wax fikrad ah kama lihid in alaabtaadu ay xitaa ka muuqato bogga guriga, qayb la siiyay ama inta lagu jiro baaritaanka goobta illaa waxyaalahan horay loo sii gorgortamayo oo nasiib wanaag lagu miisaamo taas.
Halkani waa meesha cabirrada cusub Helitaan iyo Dukaan qaadasho soo gal.
Waxaa allifay Falanqaynta Mawduuca:
Helitaan waa cabbiraadda awoodda macmiilku u leeyahay inuu ku soo helo shey internetka laga helo.
Dukaan qaadasho waxay saameyn ku yeelaneysaa awoodda macaamil ee suurtagalka ah inuu sameeyo go'aan macquul ah
Ma jiraa macluumaad ku filan oo ku saabsan qeexitaannada, cabbirka, baakadaha, qiimaha, iwm, si ay dhab ahaan ugu ridaan gaariga wax iibsiga?
Aasaasaha Falanqaynta Mawduuca David Feinleib ayaa sheegay in in ka badan 75% ee raadinta goobta ee goobaha waaweyn ee e-commerce sida Amazon iyo Walmart.com ay yihiin shuruudaha raadinta guud halkii ay ka ahaan lahaayeen magacyada sumadaha. Sideed ku ogaan kartaa haddii badeecadaadu ka muuqato bogga koowaad ee natiijooyinka raadinta dukaanka? Tani waa mid muhiim ah maxaa yeelay alaabooyinka saddexda boos ee ugu sarreeya waxay ku raaxaystaan ​​afar jeer taraafikada marka loo eego dhammaan natiijooyinka kale ee la isku daray. Arrintaan, dabcan, waxaa si weyn uga sii dartay dukaamaysiga moobiilka.
Dhinaca Shopability-ka, baayac mushtarka internetka wuxuu u baahan yahay inuu ogaado haddii macluumaadka saxda ah loo geeyo dukaameeyaha qaabka saxda ah, waqtiga saxda ah, si loogu beddelo iibsade. Sawirro, muraayadaha iyo dib u eegista waa inay joogaan si loo hubiyo iibka.
Saacaddiiba, Falanqaynta Mawduucyada waxay kormeertaa goobaha tafaariiqda oo ay ku jiraan Amazon, Best Buy, Costco, CVS, Drugstore.com, Naadiga Sam, Iyo Walmart si loo arko meesha iyo sida alaabadaadu u muuqato.
Shay waa ka mid ah stock? Waxaad heleysaa digniin.
Shay lumiyo darajadiisa natiijooyinka raadinta? Waxaad heleysaa digniin.
Tartankaaga waxay bedeshaa qiimeyntooda tafaariiqle la siiyay? Waxaad heleysaa digniin.
Tiro yar oo ah dib u eegis sheyga? Waxaad heleysaa digniin.
Muuqaal xumo on qalab mobile? Waxaad heleysaa digniin.
Pictures aan bixin sidii la filayay? Waxaad heleysaa digniin.
In kasta oo tikniyoolajiyadda lafteedu aysan aheyn mid layaableh, ururinta iyo falanqaynta noocyada saxda ah ee xogta waxay cadeynayaan inay yihiin qiimo aad u qiimo badan adduunka internetka.
Haddii aad ku jirto adduunka e-commerce, waa waqtigii lagu dari lahaa Helitaanka iyo Dukaamaynta metrikadaada qaamuusyada.
Tags: ecommerceqiyaasta ecommerceheliddukaamaysiga
MockupsJar: Mockups Mocksups for Mobile iyo Desktop